सरकारभित्रै विश्वासको संकट – Nepalpostkhabar
Kali Bahadur Nepali । २७ असार २०७६, शुक्रबार ०६:५० मा प्रकाशित
काठमाडौं । ‘भारतबाट पत्र आयो १ खोई कसला ई पत्र आयो ? मैले थाहा पाइनँ । कसले पढ्यो त्यो पत्र ? मैले बुझेको छैन’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार २१ गते संसदीय दलको बैठकमा गरेको आश्चर्यवाचक प्रश्न थियो यो । प्रसंग थियो, भन्सारमा फलफुल तथा तरकारीको विषादी चेकजाँच गर्ने निर्णय फिर्ता लिन भारतले पत्र पठाएर दवाव दिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै पेपरलेस बनाई सुचनामा सहज पहुँच बनाउन डिजिटल नेपालको अवधारणा सुरु गरेपनि सुचनाको यति ठुलो ‘ग्याप’ मन्त्रिपरिषद्मै देखिएको छ । जसले गर्दा सरकारभित्र अविश्वासको ठुलो खाडल देखापरेको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को गम्भीर कुरा पनि उठाएका छन् । त्यो हो– ‘मलाई झुक्याइयो । अर्थात बेलैमा जानकारी दिएन ।’ हो, सबैभन्दा गम्भीर र संवेदनशील विषय यही हो । देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई गलत सूचना दिने, समयमा सूचना नदिने अथवा सूचना नै लुकाउने रु सम्भव छ रु सामान्य नागरिकले यो कुरा विश्वास गर्दैनन् । तर, प्रधानमन्त्रीले नै भनेपछि विश्वास नगरेर सुखै छैन ।
पत्र कताकता पुग्यो
यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले घटनाबारे छानबिन भइरहेको भन्दै दोषीलाई कारवाही गर्ने पनि बताएका छन् । ‘पत्र आएर पनि मलाई झुट बोल्न लगाइयो । भुलचुक र नियतबस के हो रु त्यो म बुझ्दैछुु । खोज्दैछु । त्यसपछि के गर्नुपर्ने हो गर्न तयार छु’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।